देशदृष्टि – Page5– Blog by Milan Bagale
Posted bymilanbagale September 5, 2020 September 5, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on मैलो मनको उपचार
ज्योतिको पंख उचाली ।
सुन्दर शान्त विशाल ।
देशलाई कसरी सम्झनुपर्छ ? देशलाई कसरी माया गर्नुपर्छ ? देश भनेको के हो ? कलिलो दिमागले यस्तो कुरा कसरी सक्ने ? कविवर माधव घिमिरे छडी बोकेर कक्षाकोठामा पस्नुभएन । मायालु शब्द बोकेर पस्नुभयो । पाठ्यपुस्तकको बाहिरी कभरमा राखिने कक्षागत गीतमार्फत ‘ज्योतिको पंख उचाल्नु’ भन्दै सम्झाउन आउनुभयो । यी हरफ कसका हुन् ? हामीलाई मेसो थिएन । भाका फिराईफिराई गाउनुपर्छ भन्ने मेसोमात्र थियो । अर्थपनि थाहा थिएन । उहाँले देश खोज्न मात्र होइन, सियो खोज्नसमेत सिकाउनुभयो । सियो खोइ सियो भन्दै खोज्न सिकाउने कवि नेपाली साहित्यकै मियो होलान् भनेर कल्पना गरिएको थिएन । मियो बनेर साहित्य सेवा गर्नुभएका स्रष्टाले जीवन बिसाउनुभएको ननिको खबर भदौ २ गते शुक्रबार साँझ गोरखापत्रको अनलाइन संस्करणमा देखियो । लगत्तै सबै डिजिटल पत्रिका र सामाजिक सञ्जाल उहाँको भौतिक अवसानको खबरले भरिए । कोरोना कहरमा अर्को नमिठो खबर । कविवर गम्भीर रुपले विरामी पर्नुभएको खबर कतै आएको थिएन । अचानकै निधनको खबर आयो । १०१ बर्ष बाँचेर संसार ठप्प रोकिएको समयको एउटा साक्षीसमेत बनेर उहाँले जीवन बिसाउनुभयो ।
कविवर घिमिरेले असाध्यै लोभलाग्दो जीवन बाँच्नुभो । उहाँको सजनात्मक जीवनपनि उस्तै रह्यो । सृजना यात्रा अविरल चलिरह्यो । ऋतम्भरा महाकाव्य नसिध्याई जान्न भन्नुहुने महाकविले त्यो काम सम्पन्न गर्नुभएको रहेछ । सो कुरा निधनलगत्तै थाहा पाईयो । हाम्रालागी उहाँको त्यो अन्तिम नासो हो ।
चित्र साभार— भानु भट्टराई, हिमालखबर डटकम
कविवरले प्रकृति र राष्ट्रप्रेमको धार समातेर अमर कयौं सृजना देशलाई दिनुभयो । बालबालिकाका लागी कयौं मिठा सृजनाहरु उपहार दिनुभो । कस्तो अविरल र अविचलित यात्रा । जीवनको एउटा क्षणमा धेरै मानिस कवि बन्छन् । धेरैको कवि जीवन असाध्यै अल्पायुको हुन्छ । उनीहरुभित्रै हराएर जान्छ त्यो जीवन । कविको रुपमा सामाजिक पहिचान भएका धेरैका झोलामा पुराना सृजना र ती सृजनाप्रतिको गौरवमात्र बाकी रहन्छ । कविवरको झोला त्यस्तो थिएन । उहाँका झोला नयाँ—नयाँ सृजनाले भरिभराउ भैराख्यो । पुराना सृजनाको ब्याज खाने रहर उहाँले गर्नु भएन । कविवर नेपालको अस्तित्व रहेसम्मै कवि बनेर बाँच्नुहुनेछ
हरेक कवि/लेखकका सबै सृजना जीवन्त हुँदैनन् । सबै रचनाले धेरैका मन छुँदैनन् । मन न हो । लेखकलाई मात्र मन परेर हुँदैन । ‘गाउँछ गीत नेपाली’ सम्भवत सबैभन्दा धेरैलाई मन छोएको सृजना हुनुपर्छ । पुरानो राष्ट्रिय गानको औचित्य सकिएर नयाँ राष्ट्रिय गान नआएसम्म अनौपचारिक रुपमा कयौं विद्यालयमा यो गीत गाउने गरिएको पनि थियो । गौरी, मालती मंगले, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारु चर्चा र कैयन जीवन्त सृजनाहरु मार्फत उहाँ नेपाली मनमनमा बस्नुभएको छ ।
२०६० साल असोज ९ गते उहाँलाई सरकारले राष्ट्रकवि बनायो । उहाँलाई राष्ट्रकवि बनाईएको समय देश अनेक अप्ठेरोसंग जुध्दै थियो । कविवरका हिसाबले पाठकका दिलमा बसिसक्नु भएकोले त्यो राजकीय पदभन्दा कविवरको कद नै मलाई धेरै उचो लाग्छ । राज्यले उहाँप्रति दिएको सम्मान र सुविधाको आफ्नै महत्व छ । चोला विसाएपछि बल्ल पाठकसम्म पुग्ने, सिंगो जीवन गुमनाम भएर बित्ने, गुजारा चलाउन, उपचार पाउन नसकेर कष्टकर जीवन झेल्नुपर्ने अवस्था उहाँलाई परेन । यो कुरामा घिमिरे भाग्यमानी हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रप्रेमलाई केन्द्रमा राखेर साहित्य सेवा गर्नु भएकोले जति ब्यवस्था फेरिएपनि उहाँ सबैको प्रिय हुनुभयो । उहाँको कलमले कहिल्यै कसैप्रति घृणा रोपेन । उहाँले मानव, राष्ट्र र प्रकृतिप्रेमको बाटो अंगाल्नुभयो । यो बाटोमा अनवरत हिडिरहनुभयो । त्यसैले त उहाँका हरेक शब्द मोतीका दानाजस्ता छन् । उहाँ धेरै विधामा फिजिनुपनि भएन । धेरैथरी विचार बोकेर पनि हिड्नु भएन । त्यसकारण उहाँ छरिनु भएन । सग्लो र अग्लो कविको छवि बनाईरहनुभयो ।
नेपाली साहित्यमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र लेखनाथ पौडेलको स्थान निकै उचो छ । उहाँहरु कस्ता हुनुहुन्थ्यो होला भनेर म बेलाबेलामा कल्पन्छु । हामीपछिको पुस्ताले माधव घिमिरे कस्ता थिए होलान् भनेर कल्पना गर्नेछन् । देवकोटाबारे धेरै भ्रम फिजिए । अनेक मिथकहरु बने । सधैं उहाँलाई कठैबरा बनाईयो । प्रविधिको यो युगले घिमिरेलाई चाहि मिथक बनाउने छैन । अनेक भ्रमका कथा बुन्ने छैन । देवकोटा र पौडेल अँध्यारो युगमा बत्ती बनेर जन्मिनुभयो । उहाँहरु बितेपछि फेरि अँध्यारोले अनेक कथा बनायो र हामीले अनेक मिथक सुन्नुप¥यो । घिमिरे उज्यालो युगमा लामो समयसम्म जिउन पाउनुभयो । आफैंले प्रशस्त उज्यालो पनि बाड्नुभयो । घिमिरेले नेपाली साहित्यमा छर्नुभएको उज्यालो नेपालको अस्तित्व रहेसम्म मेटिने छैन
कोरोना कहरले जिन्दगी घरभित्रै खुम्चिएको छ । कविवरले खुम्चिएको र थुनिएको संसार पनि महसुस गर्नुभयो । कमजोर स्वास्थ्यका कारण थुनिएको संसारबारे केही रचना लेख्नचाहि सायद सक्नुभएन कि ? संसार थुनिएको समयमा उहाँले चोला बिसाउनु भएकोले अन्तिम दर्शन गर्न त सम्भव भएन । कविवरलाई मनमनै हार्दिक प्रणाम । उहाँले चोला बिसाउनुभएको घर नेपाली साहित्यको तीर्थस्थल हो । साहित्यप्रेमीमीका लागी त्यो दैलो सधैं खुल्ला छँदै थियो । नेपाली साहित्यको भर हो त्यो घर । त्यो तीर्थस्थललाई उहाँको परिवारले जीवन्त तरिकाले दीर्घकालसम्म जोगाएर राखिदिनेछ । उहाँका प्रकशित र अप्रकाशित कृति मात्र होइन, उहाँसंग सम्झना जोडिएका अरु सामान पनि परिवारले जोगाएर राख्नेछ । राज्यले उहाँको परिवारसंग हातेमालो गरेर कविवरको सम्झनालाई चीरस्थायी बनाउनेछ भन्ने कामना गरौं।
शब्दको सृजनात्मक शक्ति के हो, कविवरले राम्ररी बुझाईदिनुभएको छ । शब्दलाई मोती बनाएर उन्न सिकाउनुभएको छ । धरतीलाई माया गर्न सिकाउनुभएको छ । आफ्ना जीवन्त रचनामार्फत कहिल्यै नमर्ने गरी यो धरतीबाट विदा हुनुभएका कविवरको आत्मा सधैं सुखी रहोस् । ज्योतिको पंख उचाल्न सिकेको नेपाली कविवरलाई सदा सम्झन्छ ।
(२०७७ साल भदौ ३ गते हिमालखबर डटकममा प्रकाशित)
Posted bymilanbagale August 22, 2020 August 22, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on सदा सम्झन्छ नेपाली…
मचाहि सञ्चै छु (कविता)
सरकार चिन्न नसकेर
देश रोगाएको छ ।
कसैलाई मोतीबिन्दु भएको छ ।
कसैको मति बिग्रेको छ ।
के के मात्र सुन्नु मैले
निरन्तर बेसुरा गीत बजिरहेछन् ।
कतै मास्क मागेर ।
कतै भेन्टिलेटर मागेर ।
कतै पीपीइ मागेर ।
कतै आइसोलेसन मागेर ।
रेल माग्नु छैन ।
खेल माग्नु छैन ।
पानीजहाज माग्नु छैन ।
मन्दिर माग्नु छैन ।
दवाईको सवाई गाएर बस्ने
यो देश वेश छैन ।
धन्न देशको मन्त्री
आजसम्म सन्चै छु ।
र त दवाई नखाएरै
देश बाँचेको छ ।
(२०७७ साल साउन २९ गते )
Posted bymilanbagale August 16, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on मचाहि सञ्चै छु (कविता)
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा समाजका विभिन्न चित्र र चरित्र बाहिर आएका छन् । संक्रमितसंगै मृतकको संख्या पनि बढ्दो छ । २०७७ साल साउन २ गतेसम्ममा ४० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै जाँदा शव व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ । जेठ २६ र असार ११ गते पोखरामा शव ब्यवस्थापनमा देखिएको समस्या गोरखामा पनि देखिएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका स्याङ्जाका एकजना बृद्धको शव व्यवस्थापनमा स्थानीय वडाधक्ष्यदेखि प्रदेश सांसदसम्म सम्मिलित समूहले अवरोध गर्दा १९ घण्टासम्म शव अलपत्र परेको थियो । प्लाष्टिकले पोको पारेर लगिंदै गरेको शवलाई एम्बुलेन्सभित्र बसेर मृतककी श्रीमती र छोरीले हेरिरहेको दृश्य ह्रदयविदारिक थियो । लामो रस्साकस्सीपछि जेसीभीले खाल्डो खनेर सेतीनदीको रिठ्ठे घाटमा उनको शव गाडिएको थियो । असार ११ गते पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ मा उस्तै समस्या दोहोरियो । सेती नदी किनारमा शव व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरी टायर बाले । त्यहाँ पनि झडप भयो । कतारबाट कोरोनाग्रस्त भई गृहजिल्ला फर्किएका पालुङटार निवासी एक ४४ बर्षीय ब्यक्तिको गोरखा जिल्ला अस्पतालमा असार २० गते निधन भएपछि दरौदी र लुदीखोलाको दोभानमा अत्तेष्टी गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि सो आसपासको अबुवा क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो । स्थानीयले लामो समय अवरोध गरे । प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरी भीड हटायो । मृत्यु भएको १२ घण्टापछि बल्ल शव गाडेर अन्तिम संस्कार गरियो । सेनाले शवलाई सलामी दिएर सम्मान गरेको तस्वीर गोरखाकै दरौदी डटकममा हेर्दै गर्दा मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरु उब्जिए । सेना नागरिकको शवलाई जोखिम मोलेर अन्येष्टी गरिरहेछ, सलामी दिइरहेछ । मलामी बन्नुपर्ने हातहरु अवरोधका लागी उठिरहेछन् । मान्छेसंगै मानवता पनि मर्ने रहर किन गरिरहेछ ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव ब्यवस्थापन कार्यविधि बनाएको छ । त्यसमा परम्परागत रुपमा चलिआएका स्थानमा नै विशेष सावधानी अपनाई अत्येष्टी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मृतकलाई गाड्न वा जलाउन मिल्ने उल्लेख छ । मृत शरीरलाई उठाउनुअघि डेड बडी ब्यागमा बन्द गरी (वा सेतो कपडाले बेरी प्लाष्टिकले बेर्ने) शव बाहन चालक र शव ब्यवस्थापन टिम सदस्यले पीपीइ लगाउनुपर्ने, अन्तिम संस्कारमा सहभागी नातेदार र आफन्तले पन्जा, टोपी, मास्क सहितको पीपीइ लगाउनुपर्ने, १ मिटर टाढाबाट हेर्न पाउने, अस्तुले जोखिम पैदा नहुने हुँदा उठाउन मिल्ने जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । यति धेरै सावधानी अपनाएर अन्तिम संस्कार गर्दा पनि ढुंगामुढा गरिनुले समाजमा चेतनाभन्दा अफवाह बढी फिजिएको र समस्याप्रति समाज सम्वेदनशील बन्न पटक्कै नखोजेको महसुस हुन्छ । स्थानीय अगुवाहरुले नै समाजलाई सम्हाल्नुपर्नेमा आफै उत्तेजित बनेर अवरोध गर्दै हिड्नु दुखद छ।
स्केच साभार— भानु भट्टराई/हिमालखबर डटकम
हामी कोही पनि अजम्बरी छैनौं । कोरोना भएपनि/नभएपनि मृत्यु शाश्वत सत्य हो । यतिबेला त कोरोनाको नाममा मृत्युको छाया आँखै वरिपरि घुमिरहेको महसुस हुन्छ । कोरोना सिंगो मानव समाजको साझा समस्या बनेको छ । यो बिपत्ती जुनसुकै समयमा जता पनि सल्किन सक्छ । त्यसकारण सुरक्षा निकायले शव व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्टिय मापदण्डको पालना गरी तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाई गरिने अन्तिम संस्कारमा अवरोध गर्नु, संवेदनशील काममा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथी दुव्र्यवहार गर्नु, मृतकका परिवारलाई थप पीडा दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्ता काममा जनप्रतिनिधिले नै अगुवाई गर्नु ठूलो बिडम्बना हो । सुरक्षात्मक उपाय अपनाईएको छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि यति संवेदनशील बिषयमा समस्या निकाल्नु र समाजलाई उत्तेजित बनाउनु जनप्रतिनिधिको धर्मभित्र पर्दैन ।
मृत शरीरले खोक्दैन । थुक्दैन । हाच्छ्यु पनि गर्दैन । न छुन जानु परेको छ, न त बोक्न नै । यो सबै जिम्मेवारी सुरक्षा निकायले आफ्नो काँधमा हालेका छन् । अनि मृत शरीरले कसरी कोरोना सार्छ ? जिउँदा मान्छे काम परेर मात्र होइन, विना काम लखरलखर हिडेकै छन् । भीडभाड गरेकै छन् । हुलका हुल हाहाहाहु गर्दै हिडेका छन् । यो संसारमा कोरोना नै छैन जस्तो गरी भोजभतेर, भेला, मेला, उत्सव, सम्मान, पुरस्कार, आन्दोलन, नाचगान सबै चलेकै छन् । सानादेखि ठूलासम्म सबैलाई मास्क नलगाए पनि चलेकै छ । साबुनपानीले राम्ररी हात नधोए पनि चलेकै छ । यतिधेरै मनपरी गरेर पनि मृत शरीरसंग पनि किन सातो उडेको ? अलक्क अत्येष्टी गरिएको मृत शरीरले कोरोना सार्ने होइन, शव ब्यवस्थापनको विरोध गर्न हुलका हुल बाँधेर जाँदा जिउँदो मान्छेले कोरोना सार्न सक्छ । स्थानीय एफएम र पत्रपत्रिकाहरुमा यसबारे सचेतनामूलक सामाग्रीहरु प्रसारण तथा प्रकाशन भए भ्रम अलिकति चिरिन्थ्यो कि ? सामाजिक सन्जालमा भाइरल हुने अपवाह नै नेपाली समाजको सूचनाको आधिकारिक स्रोत बनेको छ । त्यस्तै अफवाहको पछि लागेर समाज भ्रमित भएको छ । भ्रमको पोको त छँदैछ, आफूलाई कहिल्यै समस्या नै पर्दैन भनेजसरी समाज स्वार्थी पनि बन्दै गएको छ । आफूलाई नपरेसम्म पटक्कै संवेदनशील नहुने रोग झांगिदो छ । हरेक सामाजिक समस्यालाई आफ्नो हैन, सरकारको समस्याको रुपमा बुझ्ने रोग फैलिदो छ । यो रोग पनि कोरोनाजस्तै डरलाग्दो छ । यो नदेखिने रोगले समाजको हार्दिकता हराउँदै गएको छ । भीड लखेट्दै लाठी चार्ज गर्दै अन्तिम संस्कार गर्न बाध्य हुनु असाध्यै दुखद छ । यति धेरै संवेदनाहीन बन्न नेपाली समाजलाई सुहाउँदैन । जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी, यो उखान होइन । हाम्रो जीवनचक्र हो । जीवनको चक्र नै उखेलिने गरी हामी कति असहिष्णु बन्न थाल्यौ ? अराजकताको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरुले आत्ममन्थन गर्नुपर्ने भएको छ ।
कोरोनाबाट बच्न हामीले भौतिक दूरीको पालना गर्नुपर्छ । तर यसलाई सामाजिक दूरी भनियो । त्यो सामाजिक दूरीले छिछि र दूरदूर निम्त्यायो । क्वारेन्टाइन र आइसोलेन सेन्टरहरुमा सामाजिक दूरीले दूरदूर निम्त्यायो । त्यहाँ बसेकाहरु दुव्र्यवहार भोग्न बाध्य भए । त्यही दुव्र्यवहारको निरन्तरता मृतकको शव व्यवस्थापनमा देखियो । समाज यति धेरै असंवेदनशील नबनोस् । हाम्रोमा पनि कोरोना भुसको आगोझै सल्किसकेको हुनसक्छ । सरकारले अड्कली अड्कली कोरोना जाँचेको छ । समुदाय स्तरमा जाँच हुनै सकेको छैन । सरकारको समर्थन र विरोधको नाममा सडकमा तनाव देखिएकै छ । मास्क पनि हामीले सरकारका लागी लगाईदिए जस्तो गरेका छौं । कोरोना सल्कियो भने दुख पाउने सरकारले हैन हामीले नै हो । बिपत्ती जो कोहीलाई आउन सक्छ । अहिले नाराजुलुस गर्दा बहादुरी गरें भन्ने लाग्दो हो । त्यही नाराजुलुसबाट घर फर्किदा शरीरभित्र भाइरस पस्न सक्छ । त्यसले आफूलाई मात्र होइन, परिवार र समाजलाई नै पिर्न सक्छ । अरुलाई सताउन हिड्दा आफू जोखिमको जातोमा पर्न सक्छु र भोली त्यो दुर्दशा आफूलाई आउन सक्छ भन्ने नबिर्सौ । मृत शरीरलाई दुव्र्यवहार गरेर ,मृतकका परिवारलाई थप पीडा दिएर सुरक्षाकर्मीलाई सताएर हामीले केही जित्दैनौं । हामीभित्रको खराब मान्छे चिनाउने कामबाहेक अरु उपलब्धी केही मिल्दैन । कोरोना सरकारको समस्या होइन । सिंगो मानव समुदायको समस्या हो । मानसिक र सामाजिक दूरी होइन, भौतिक दूरीमात्र कायम गरौं । मनको दूरी बढाएर कसैंलाई दुख दिने काम नगरौं । कोरोना रहर हैन, कहर हो । हुलदुंगा गरेर थप कहर नथपौं । अरुलाई कहर थप्न जाँदा आफ्नो शरीरभित्र कोरोनाले पस्ने रहर गर्छ । मानवता जिउँदै राखौं । मृतकसंग हैन, जीवितसंग सजग होऔं । जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी लाई उखानमा सीमित नगरौं ।
(२०७७ साल असार २८ गते हिमालखबर डटकममा प्रकाशित लेखलाई परिमार्जनसहित राखिएको)
Posted bymilanbagale July 17, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on घाटमा हराएको मानवता
मर्न मिल्ने बाटो (कविता)
कोरोनाले तर्सिएको सग्लो जिन्दगी
खुट्टाले नापेर देश पस्यो,
क्वारेन्टाइनमा बस्यो ।
कोरोना सल्किएको देशमा
कोरोनाले मर्न मिल्दैन
पखालाले मर्न मिल्छ ।
मिल्ने बाटो समातेपछि
सरकारलाई गाली गर्न मिल्छ ?
सदाको लागी अस्ताएको
राजुको सदाको आत्मालाई सोध्नु,
आत्मा कोरोनामुक्त छ ।
सडकमा भोकै मर्नु
धारो छुन नपाएर नदीतिर झर्नु
क्वारेन्टाइनमा पासो लगाएर मर्नु
कोरोनाको मापदण्ड होइन ।
सके तारिफ गर्नु, नसके खेदो नगर्नु ।
सरकार कोरोना भगाउँदैछ,
लसुन बेसार लगाउँदैछ ।
भोज, भण्डारा लगाउँदैछ ।
भोकै मर्न मिल्छ,
बाटोमा अलपत्र पर्न मिल्छ ।
पखालाले छटपट गर्न मिल्छ ।
सरकारसंग खटपट गर्न मिल्दैन ।
नमिल्ने कुरो नगर्नु ।
(२०७७ साल असार ११ गते बिहिबार)
Posted bymilanbagale June 29, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on मर्न मिल्ने बाटो (कविता)
देश नचलाउनेका नाममा
यतिखेर कोरोनाले संसार चलाईरहेको छ । कोरोनाबाट बच्नु, भोकमरीबाट बच्नु र सकेको छिटो कोरोनालाई भगाउनु नै संसारको साझा एजेण्डा बनेको छ । जनता जोगाउनु नै सबै देशको साझा लक्ष्य भएको छ । घरभित्र हामी लामो समय बस्यौं । अब त जोगिएर घरबाहिर निस्कनुपर्ने समय आएको छ । कोरोना सकिएको बेलामा हैन, सल्किएको बेलामा बन्दाबन्दी खुकुलो पार्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । खुकुलिएको पनि छ । डर कसिलो हुँदा बन्दाबन्दी खुकुलो हुनुको कारण हामीले बुझेका छौं । भोकै बसेर कोरोनासंग लड्न सकिन्न । आफ्ना पसल, अफिस, व्यवसाय, खेतीपाती, उद्योगधन्धा अलक्क नखोली अब सुखै छैन ।
कोरोनासंग लड्नका लागी गर्नुपर्ने काम धेरै छ । मास्क/स्यानिटाइजर/भेन्टिलेटरको जोहो, अस्पताल व्यवस्थापन, खोप बनाउन गहन अनुसन्धान, ब्यवस्थित क्वारेन्टाइन, खाद्यान्नको प्रभावकारी वितरण, घरेलु उत्पादन र बजारीकरणमा जोड, खाद्यान्न भण्डारण, अप्ठेरोमा परेका नागरिकको निरन्तर उद्दार, अस्पतालको क्षमता बृद्धि, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन आदि काममा धेरै देश रातदिन खटेका छन् । नागरिकसंग हातेमालो गरेका छन् । तर नेपाल फरक छ ।
नेपाल कोरोना तह लगाउन जुन बाटोमा हिड्नुपर्ने हो, त्यो बाटोमा हिडिरहेको छैन । पैसा खर्च गर्नमा उ अगाडी छ । अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च गरिसक्यो । तर हिसाब सजिलै देखाउँदैन । हिसाब देखाउने आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् भन्दै हिसाबको प्रश्न पन्छाउँछ । अहिले कोरोनाले मात्र हैन, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनले पनि मान्छे मारिरहेछ । र्यापिड टेस्टको औचित्य नभएको भन्दै विज्ञहरुले रातदिन आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारको ध्यान त्यतै छ । पीसीआर परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने हो । त्यसो भैरहेको छैन । जनता सडकमा भोकै मरिरहँदा प्रधानमन्त्री ‘हाम्रो भान्सामा यो छ, उ छ, नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो छ…’ भन्दै उपहास गरिरहेछन् । नागरिकको भान्सा रित्तो भैसक्यो । प्रधानमन्त्री भान्साको बखान गरिरहेछन् । लसुना, अदुवा, बेसार, टिमुर र मरिचको ब्याख्यामै अल्झिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई यो पृथ्वीभरीका मान्छे पाउरोटी र पानीमात्र खाएर बाँच्छन्, रसिलो, पोसिलो र मिठोमसिनो खाने हामीमात्रै हौं भन्ने भ्रम परेको छ । सिंगो पृथ्वी बालुवाको ढिस्को हो , हरियोपरियो हाम्रोमा मात्र छ भन्ने भ्रम परेको छ । खोलानाला, वनजंगल र तालतलैया प्रकृतिले हाम्रा लागी मात्र बनाईदिएको हो भन्ने भ्रम परेको छ ।
कोरोनाबिरुद्ध सरकारको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता मार्फत कोरोनाले कोतरेको रिजल्ट सुनाउनुमै सीमितजस्तो देखिन थालेको छ । बाकी समय नागरिक आवाजको उपहासममै बितेको छ । संसदमा घण्टौं लामो भाषण गरेर विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानलाई उडाउनु नै प्रधानमन्त्रीको दिनचर्या बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय सरुवा, जगेडा र आरडीटीमै अल्झिरहेको छ ।
पार्टी फुटाउने, सांसद उठाउने, चोरबाटोबाट संबैधानिक परिषदमा नियुक्त गर्ने, बेसारपानी खाएर रोग भगाउने, भान्साका लसुनप्याज र रोग प्रतिरोधी भाषणलाई एकछिन बिर्सिएर देश चलाउने कुरा गरौं न । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? यस्तो ब्यवस्था चलाउने मान्छे कस्तो हुनुपर्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ? असल र स्वाभिमानी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? स्वस्थ्य, बलियो र फूर्तिलो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? देश बनाउने/जनता जोगाउने भिजन भएको मान्छे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? ब्यक्तिगत लाभहानी र लोभबाट माथी उठ्ने मान्छे चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ? नागरिक आवाजलाई उपहास नगर्ने मान्छे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? विज्ञान र प्रविधिका उपलब्धीलाई सत्तोसराप नगर्ने बरु प्रोत्साहन गर्ने मान्छे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? नियम कानून पालना गराउन दृढ ब्यक्ति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
देश चलाउने मान्छेको संगत कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? स्वार्थी व्यापारिक समूह, ठेकेदार, ह्याकर र विचौलियाबाट धेरै पर बस्नेसक्ने खालको चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ? लोभ, लाभले विचलित नहुने मान्छे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? देश चलाउनेले असल मान्छे निष्पक्ष रुपमा छानेर आफ्नो बलियो र विवेकी टिम बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? कहिलेकाही गल्ती मिसिएको निर्णय गर्दा हप्काउने हैसियत राख्ने अग्लो मान्छे प्रमुख सल्लाहाकार राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? कुनै पार्टीको समर्थन नगरी डटेर बोल्ने प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार, बिद्धानहरुसंग बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ, उनीहरुको कुरो सुन्नुपर्छ र त्यस्तो कुरालाई ग्रहण गर्ने मान्छे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? जनतालाई नहेप्ने मान्छे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । तर त्यसो हुनु दुर्लभ छ । जो प्रधानमन्त्री आएपनि स्वार्थी समूहले घेरिएको मात्र महसुस हुन्छ । असाध्यै साँघुरो घेरामा साँघुरा मान्छेबाट घेरिएर देश चलाएको महसुस हुन्छ ।
सरकारी निवासबाट पार्टी चलाउनु हुन्न भन्ने मान्छे लोकतन्त्रको शासक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? देश चलाउने ठाउँलाई भोजभतेरको अड्डा बनाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ ? सामाजिक सन्जालमा आउने आलोचनात्मक आवाजलाई ट्याउट्याउ सम्झिनु हुन्न जस्तो लाग्छ ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? चाटुकारका भजनभन्दा पर आलोचनात्मक आवाज सुन्ने र आत्मसात गर्न सक्ने मान्छे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
देश कहाँ बसेर चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ? सरकारी निवासमा बसेर ? कि सिंहदरबारको कार्यालयमा बसेर ? सिंहदरबारमा जानै सकिन्न भन्ने बुझेपछि जान सक्नेलाई जागीर बुझाउन सक्ने मान्छे चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? सपथग्रहण गरेको दुइचारपछि सरकार त घरै बसेर चल्न थाल्छ । सरकार फालिने समय आएपछि सिंहदरबारको अफिसमा पुछपाछ शुरु हुन्छ । अनि छोड्ने बेलाको सम्बोधन त्यहीबाट शुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त्यति दिक्कलाग्दो छ ? अफिस जानै मन नलाग्ने कस्तो कार्यालय छ प्रधानमन्त्रीको ? विरामी हुँदा होस् या सन्चो हुँदा, अफिसै नजाने प्रधानमन्त्री हाम्रोमा मात्र हुन्छन् कि अन्त पनि यस्तै हुन्छ ?
देश चलाउने मान्छे असल, उनका सल्लाहकार सबै खराब हुन्छन् जस्तो लाग्छ ? देश चलाउने मान्छे असल छैन भने आसेपासे, सल्लाहकार, सहयोगी, मन्त्री र सचिवपनि त्यस्तै छानीछानी राख्छ । नाबालाक राजकुमार हो र आफू असल, सल्लाहकार खराब भनेर उम्कन ? आफ्नै टिम खराब छ भनेर जाँच्न नजान्ने मान्छेले देशको सन्चोबिसन्चो कसरी हेर्छ ? कसरी चलाउछ देश ? आफ्नो कार्यालय र सानो टिम सम्हाल्न नसक्नेले देशै सम्हाल्न सक्छ जस्तो लाग्छ ? असल टिममा कहिलेकाही खराब मान्छे छिर्न सक्छन् । अथवा असल मान्छे लोभको शिकार भएर खराब बन्न सक्छन् । असल नेता छ भने आफ्नो टिममा कोही खराब मान्छे छिरेछन् भने कारबाही गरेर निकालिहाल्छ नी । खराब काम गर्नेलाई नसियत दिएको कुरा पनि लुकाउदैन असल शासकले । हरेक अपराध र अपराधीको सुरक्षा कवच बन्छ असल शासक ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
पदमा हुँदा हदैसम्मको बदमासी गरेको मान्छे पद सकिएको भोलीपल्ट थप पद पाउन ठूल्ठूलो कुरा गरेको तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? नैतिक जग नै नभएको ठूलो कुराले बारम्बार मत र मञ्च पाएको तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? सञ्चो लाग्छ ?
गरिब देशको लोकतान्त्रिक शासक कस्तो हुन्छ ? उसको जीवनशैली कस्तो हुन्छ ? उसको बर्थडेमा ब्यापारीको हेलिकोप्टर केक बोकेर डाँडापाखा उड्छ ? हेलिप्याडमा राजसिंहासनजस्तो कुर्सी पुग्छ ? लकडाउनमा दिनदिनै छतमा मासु भुटेर बस्छु भन्दै अन्तरवार्ता दिन सुहाउँछ गणतन्त्रका सारथीले ? औलाभरी औठी लाएर पद प्राप्तीका लागी तान्त्रिककहाँ धाउनेहरुले गणतन्त्र थाम्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ?
लोकतन्त्रको शासक एकतन्त्रको शासकजस्तै निरंकुश हुन्छ कि जनताको असल साथीजस्तो हुन्छ ? मिडियाबाट आउने आलोचनात्मक समाचार र विचारलाई दिमाग खुलेको भनेर मख्ख पर्छ कि सरकारले नदेख्ने तैले देख्ने भन्दै हियाउँछ ? देशकै सबैभन्दा खराब प्रशासक छानेर लोकतन्त्रको शासकले संवैधानिक परिषदको गजुरमा चढाउँछ ? न्याय मर्न नदिन अपहत्त गर्ने न्यायमूर्तिलाई महाअभियोग लगाउछ ? महामारीमा लडिरहेको डाक्टरलाई किन जनता पढाईस् भन्दै हप्काउने आँट गर्छ ? आफ्नो पालामा भएको नकाम अर्कोको पालामा उजागर हुँदा ठूल्ठूला कुरा गर्छ कि आफ्नो भागको गल्ती स्वीकारेर थप गल्ती नगरौं भन्दै आत्मालोचित हुन्छ ?
यो देशलाई धेरैले ‘चलाएँ’ भने । चलाए । अस्पतालको बेडबाटै चलाए । अक्सिजनका सिलिन्डर जोडेर पनि चलाए । बिरामी, बलिया सबैले चलाए । तर भद्रगोल तरिकाले चलाए । भताभुंग तरिकाले चलाए । लथालिंग तरिकाले चलाए । तहसनहस तरिकाले चलाए । तर देश चलाउनुलाई सकारात्मक हिसाबले बुझ्ने हो भने यो देशलाई चलाउनेहरु साह्रै थोरै निस्किए । गतिला पार्टी थोरै निस्किए । चुनाव चिन्ह देउताजस्ता बने । रक्सी, मासु र पैसाले बुथ रंगिए । उनै दोहिरिए । आलोपालो धन्धा चलिरह्यो ।
अहिले पनि देश चलिरहेको छैन । देशलाई बन्धक बनाईएको छ । देशलाई थला पारिएको छ । सांसद उठाउन राजमार्गमा गाडी दौडिन्छन् । अलपत्र नागरिक त्यही बाटोमा ८ दिन लगाएर हिड्छन् । गाउँ पुग्छन् । मिहिनेत गरेर अन्न फलाउँछन् । लगानी नै नउठ्ने गरी विचौलियालाई बुझाउछन् । बिचौलियाको जरो देश चलाउनेहरुको घरघरमा पुगेर ठोकिन्छ । बाहिरबाट अरबौंको तरकारी आउँछ । देशको तरकारीमा बारीमै कुहिन्छ । कृषिमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मिठोमसिनो भाषण समाचार माध्यममा गुन्जिइरहन्छ ।
देशमा मान्छे मात्र हैन, जनताको आवाज र अधिकारपनि अपहरण गरिएको छ । अहिलेको कुरा गरिरहेको छैन म । अलि पहिलेको कुरा पनि गरिरहेको छैन म । धेरै पहिलेदेखि नै यस्तै चलिरहेछ । ठूलो पार्टीको कोही नेताले ठूलो र चर्को कुरा बोलिरहेको छ भने बुझे हुन्छ, उ भावनाको व्यापार गरेर देश लुट्ने मौका खोजिरहेको छ । एकपटक परिक्षण भैसकेका पात्रले यसो बोल्नु त कलाबिहिन नाटक जस्तो मात्र देखिन्छ । भोट हाल्ने बेलामा जनताको विवेक भत्किएकोले यस्तो भएको होला
यो देश चलाउनेको मन न भुइँचालोले हल्लिन्छ, न कोरोनाले कोतर्छ । कहिले पाल उठाउँछ । कहिले नक्कली किट ल्याएर पैसा खान्छ । महामारीमा डाक्टर हप्काउँछ, डाक्टरको पीपीईलाई मन्त्रीका पतिले भात पकाउने लुगा सम्झन्छ । भुइँचालोमा इन्जिनियर हप्काउछ । पढेलेखेका मान्छेलाई आफ्नो चरणको दास ठान्छ । चरणका दासहरु छानीछानी तक्मा बाड्छ । छनौट समितिको संयोजकले नै सबैभन्दा ठूलो तक्मा उठाउँछ । मान्छे यति धेरै विवेकहीन किन र कसरी बन्छ ? यति धेरै कठोर, निरंकुश, एकांकी सोच राख्ने दलहरुले लोकतन्त्रको बर्कोचाहि किन ओड्छन् ? देश नचलाउनेहरुलाई प्रश्न सोध्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ । देश नचलाउनेहरु प्रश्न पनि नचलाउदै खुशी मान्छन् ।
Posted bymilanbagale June 11, 2020 June 11, 2020 Posted inUncategorized2 Comments on देश नचलाउनेका नाममा
सबै राम्रो छ ।
रोग धेरै छ ,
त्यसैले रोग प्रतिरोधी क्षमता छ ।
भोक धेरै छ ,
त्यसैले भोक प्रतिरोधी क्षमता छ ।
शोक धेरै छ ,
त्यसैले शोक प्रतिरोधी क्षमता छ ।
हिंसा धेरै छ ,
त्यसैले हिंसा प्रतिरोधी क्षमता छ ।
अन्याय धेरै छ ,
त्यसैले अन्याय प्रतिरोधी क्षमता छ ।
अपमान धेरै छ ,
त्यसैले अपमान प्रतिरोधी क्षमता छ ।
भय धेरै छ ,
त्यसैले भय प्रतिरोधी क्षमता छ ।
डर धेरै छ ,
त्यसैले डर प्रतिरोधी क्षमता छ ।
सरकार धेरै छ ,
त्यसैले सरकार प्रतिरोधी क्षमता छ ।
डर धेरै छ ।
भर थोरै छ ।
(२०७७ साल जेठ २८ गते बिहिबार)
Posted bymilanbagale June 10, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on प्रतिरोधी क्षमता
लोकतन्त्र र बालुवाको ढिस्को
२०७७ साल जेठ २७ मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माननीय गगन थापाले प्रतिपक्षी दलको सांसद भएर हैन, आम नागरिक भएर सरकारमाथी यक्ष प्रश्न तेस्र्याए । उनले आम नागरिकको मनमा खेलिरहँदा प्रश्नलाई आवाज दिए, आकार दिए । सरकारमा बस्नेहरुको कानसम्म हैन, मनसम्मै त्यो आवाज पुर्याए । उनले कोरोना नियन्त्रणको नाममा खर्च गरिएको १० अर्ब रुपैंयाको हिसाबकिताब मागेका छन् । क्वारेन्टाइन किन मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प बन्यो भन्दै अर्को प्रश्न पनि उठाएका छन् । सरकार कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका शवको संख्या गनिरहेछ । खासै धेरै हैन …भन्दै सन्चो मानिरहेछ । सांसद थापाले योबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । आत्महत्या गरेका, सडकमा भोकभोकै मरेका, उपचार नपाएर मरेका नागरिकको संख्या गन्न किन बिर्सिएको भन्दै सरकार यस्तो बिपत्तीमा पनि सन्चो मानेर बसेको बसेकोप्रति गम्भीर आपत्ती जनाएका छन् ।
सरकारको एकोहोरो खेदो गर्नु प्रतिपक्षी धर्म होइन । सत्ताको साझेदारजस्तो भएर सरकारका सबै तमासा टुलुटुलु नियालेर बस्नु पनि प्रतिपक्षी धर्म होइन । प्रतिपक्षमा बसेका प्रदीप गिरी, गगन थापा र सत्तापक्षकै रामकुमारी झाक्रीले आलोचनात्मक चेतसहित सरकारसंग संसदमा सार्थक सम्वाद गर्ने गरेका छन् । झाक्रीले त सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा आफ्नो परिचयमै लेखेकी छिन् — ‘र, म तिनको आवाज बोल्छु जसको आवाज दबाईएको छ ।’ निरपेक्ष रुपमा सत्ताको जयजयकार र मुर्दाबाद दुबैले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन । जिन्दावाद र मुर्दावादभन्दा पर रहेर सरकारको रखबारी र खबरदारी गर्दा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । सरकारका लागी त्यो औषधी हो । हिजो नै सचेत युवाहरुले भौतिक दूरी कायम गर्दै अत्यन्त शिष्ट र रचनात्मक तरिकाले प्रधानमन्त्री निवासअगाडी सरकारलाई घच्घच्याउने प्रयास गरे । ¥यापिड टेस्टमा किन मरिहत्ते ? भन्ने नागरिक आवाजलाई सरकारले सुन्न चाहेन । गलहत्यायो । नागरिकले १० अर्बको हिसाब पनि खोजे । निरेपक्ष लकडाउन र करको दुरुप्रयोगबारे पनि प्रश्न सोधे । सरकारले यी प्रश्नलाई पानीको फोहोराले पखाल्ने प्रयास ग¥यो । लाठीले दबाउने प्रयास ग¥यो । प्रश्न गर्ने शैली शिष्ट थियो । जवाफ दिने शैली अशिष्ठ थियो । अशिष्ठता लोकतन्त्रलाई सुहाउन्न ।प्रश्न गर्न पाउनु नागरिक अधिकार हो । सरकार प्रश्नसंग डराईरहेको छ ।
लोकतन्त्रको सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको साथी हो । जब सरकार सरदार बन्ने रहर गर्छ, नागरिकले खबरदारी गर्छ । नागरिकले दिएको १—१ रुपैंया जम्मा पारेर सरकार चल्छ । सरकार नागरिकले भरेको ठूलो खुत्रुके हो । आफ्नो पसिनाले भरिएको खुत्रुकेको हिसाब जनताले माग्छन् । सरकारले देखाएको हिसाबकिताबमा चित्त बुझे नागरिकले धन्यवाद भन्छन् । नबुझे फेरि हिसाब माग्छन् । पदमा के नामको, के थरको, कुन गाउँको, कुन जातको र कुन पार्टीको मान्छे छ भन्ने कुरासंग सचेत नागरिकलाई सरोकार हुँदैन । प्रधानमन्त्री सबैका साझा हुन् । नागरिकको आलोचनात्मक आवाज गुन्जिनासाथ सडक, सदन र सामाजिक सन्जाल सबैतिर आक्रमण गर्ने शैली लोकतन्त्रका लागी घातक छ ।
सरकारको कामै नहेरी लोभ, लाभ र आस्था हेरेर समर्थन गर्नेहरु सरकारका लागी साह्रै घातक हुन्छन् । त्यस्तो शैलीले सरकार प्रमुखलाई नांगो बादशाह बनाउँछ । प्रधानमन्त्रीसंग उनलाई नांगो बादशाह बनाउन रहर गर्ने टिम छ । भजनमण्डली छ । त्यो मण्डली नै प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । मण्डलीले प्रमलाई पूरै खोक्रो बनाईसकेको छ । अघिल्लो कार्यकाल लोभलाग्दो थियो । यो कार्यकल हदै टिठलाग्दो छ । अघिल्लो कार्यकालमा सांसद थोरै, शुभेच्छुक धेरै थिए । यसपाली सांसद र मण्डली धेरै, शुभेच्छुक थोरै छन् । प्रधानमन्त्री डरको हैन, भरको शक्ति बन्नुपर्छ । उहाँको यो शक्ति सक्किएको छैन, नराम्रोसंग मक्किएको चाहि छ । सचेत नागरिकले यति बोल्न र लेख्न सक्नुपर्छ । भेटेर भन्न सक्ने अगुवाले भन्न पनि सक्नुपर्छ । कसैले केही भन्ला कि भनेर गरिने सेल्फ सेन्सरसीपले आलाचनात्मक र रचनात्मक चेतलाई भुत्ते बनाउँछ । लोकतन्त्र पनि कमजोर बनाउँछ ।
हिंसाको राजनीति गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, आफू रमितामा रमाएर जनतालाई अलपत्र पार्ने, नागरिकलाई हेप्ने जुनसुकै थर र दलका मान्छेलाई हामीले प्रश्न गरिरहनुपर्छ । प्रश्नले लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन । सिमेन्ट थप्छ । जयजयकार त बालुवा हो । बालुवाको ढिस्को हो । जयजयकारले लोकतन्त्र मास्छ । एकतन्त्र जन्माउँछ । निरंकुश शासक जन्माउँछ । बालुवाको ढिस्कोमाथी उभिएर नागरिक हकार्ने शासकलाई त बालुवाको ढिस्कोले नै सिध्याउँछ । अलिकति हलचल गरियो भने ढिस्को भत्किन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको सरकार एकोहोरो जयजयकारमा रमाउनु हुँदैन । नागरिकको निष्पक्ष आवाज सिमेन्ट हो । सिमेन्ट थपे बल्ल बालुवाको ढिस्को बलियो किल्लामा परिणत हुन्छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले देशको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा थप्नुभएको छ । यो काममा पास हुनुभो भने इतिहासले सम्मानपूर्वक सम्झन्छ । तर एउटा नक्सा कोरेर सरकार आनन्दले सुत्न र नागरिकलाई अलपत्र पार्न पाउँदैन । सुत्यो भनेर नागरिक कराएपछि सरकार उठ्छ । उठेपछि उपध्रो गर्छ । उप्रधो बोल्छ । त्यसो गर्नलाई उठ … भनिएको हैन । नक्सालाई ठेक्का लिएर अलपत्र पारिएको पूलजस्तो बनाउन पनि हुँदैन । नक्सा अनुसार जमिन पनि आउनुपर्छ । आउला पनि । त्यसका लागी सरकारलाई सबैले घच्घचाई रहनु पर्छ । त्यसले सरकारलाई बल थप्छ । जब नागरिक जागै हुन्छन् नी, जागेका नागरिकको चेतनाले बालेको उज्यालोले सरकारको आत्मबल बलियो हुन्छ । सरकारले जनता जोगाउनु छ । जमिन जोगाउनु छ । जमिन र जनता जोगाउन जानेको दिन सरकारको जय होस्
Posted bymilanbagale June 9, 2020 June 9, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on लोकतन्त्र र बालुवाको ढिस्को
भेरीमा धकेलिएको मानवता
२०७७ साल जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा भएको जघन्य हत्याकाण्डले धेरैको मन हल्लाएको छ । एक ‘दलित’ युवकले ‘गैरदलित’ युवतीलाई मन पराएकै कारण मानवता निर्ममतापूर्वक लखेटियो र भेरी नदीमा धकेलियो । सो घटनामा ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मारिनेमध्ये एकजनाको शरीर डोरीले बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको खबर देखापढी डटकमले छापेको छ । यो क्रुर, पाशविक र जघन्य हत्याकाण्डको जति निन्दा पनि कम हुन्छ । गैरदलितलाई दलितले प्रेम गर्दा समाज यति क्रुर, जंगली र असभ्य रुपमा उत्रन्छ भन्ने कल्पना कसले गरेको थियो र ?
तस्वीर साभार — हिमालखबर डटकम
मान्छेलाई लखेटीलखेटी नदीमा धकेलेर मार्नेहरुले सदाझैं त्यो दिन बिहान नुहाएका थिए होलान् । पूजापाठ गरेर शंखघण्ट पनि बजाएका थिए होलान् । साँझमा बत्ती बालेका पनि थिए होलान् । हाम्रो समाज धर्मकर्ममा अडिएको छ भन्ठान्छौं । तर हाम्रो समाज पूजापाठको आँडमा धर्मको बर्को ओढेर अनेक अधर्म गरिरहेको छ । अनेकखाले पापको रचना गरेको छ । भगवानलाई समेत निर्दोष पशुको रगतले लत्पत्याउने कुकर्म गरिहेछ र धर्म गरें भन्दै दंग परिहेछ । यस्तै कुकर्मको आँडमा समाजमा मान्छे र पशुपंक्षीमाथी अनेक हिंसा थोपरिरहेछ । पशुपंक्षीमाथीको जघन्य हिंसा, घरघरमा महिलामाथी हिंसा, फरक विचार र वादमाथीको हिंसा, ‘दलित’माथी हिंसा, अपांगता भएका ब्यक्तिमाथी हिंसा । हिंसै हिंसाको पहाडमा उभिएको छ हाम्रो समाज । फरक मत सुन्नै चाहँदैन । कानूनी उपचार खोज्दै खोज्दैन । चित्त बुझेन कि मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छं भनिहाल्छ । खुकुरी खोजिहाल्छ । भाला खोजिहाल्छ । ढुंगा खोजिहाल्छ । नदीमा धकेल्न र भीरबाट खसाल्न खोजिहाल्छ ।
दुखको कुरा, यति बर्बर हत्याकाण्ड हुँदा पनि समाज एकढिक्का देखिएन । सामाजिक सञ्जालमा कतिपय प्रतिक्रियाहरु असाध्यै संवेदनहीन देखिए । घर घेर्न किन गए, लकडाउनमा कसरी गए, छोरी अपहरण गर्न जानेलाई के गर्नु त जस्ता प्रश्नहरु औचित्यहीन छन् । हिंसाको जगमा उभिएको समाजले हिंसाको औचित्य पुष्टि गर्ने र हिंसालाई ढाकछोप गर्ने रहर गरिहाल्छ । उसलाई हिंसा अनौठो लाग्दैन ।
विभिन्न अखबार र अनलाइनमा आएका समाचार अनुसार प्रेमिकाकै सहमतीमा उनलाई लिन गएका नवराज बिक र उनका साथीहरुले प्रेमिकाको घरमा जोरजबरजस्ती गरेका छैनन् । घरभित्र छिर्न खोजेर अपहरण शैलीमा उठाउन खोजेका पनि छैनन् । डर, धाक धम्की दिएका पनि छैनन् । प्रेमिकाकी आमाले गालीगलौज गर्न थालेपछि तथा हल्लाखल्ला गर्न थालेपछि उनीहरु डराएर निस्केका छन् । आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेपछि छिटोछिटो लम्केका छन् ।
आफ्नो घरमा दलबलसहित छोरी लिन आएपछि चिच्याउनु, कराउनु, झगडा हुनु, भनाभन हुनुलाई स्वभाभिक मान्न सकिएला । तर हत्या कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुँदै हुँदैन । हल्लाखल्ला भएपछि डराएर लुरुलुरु आफ्नो बाटो लागेका युवकहरुलाई गौडा ढुकेर, घेरा हालेर, जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा लखेटीलखेटी नदीमा खेदेर मार्नु हदैसम्मको ज्यादति र अपराध हो । ‘दलित’ युवकको सट्टा गैर‘दलित’ युवकको टीम त्यसरी घरमा गएको भए मार्ने तहमा गाउँ उत्रिदैनथ्यो होला । ‘दलित’लाई जे जस्तो ज्यादती पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पापी मानसकिताको उपज पनि हो यो घटना ।
पीडितभन्दा पीडक बलियो भएपछि हरेक अपराधलाई सर्लक्कै मोड्ने र अपराधी बचाउन जस्तोपनि झुठो प्रमाण बनाउन सक्ने हैसियत नेपाली राज्य प्रशासनको छ । र, तर, किन्तु, परन्तुले हत्या ढाकछोप गर्ने, पीडित पक्षलाई नै दोषी देखाउने, मुद्दा मिलाउने, काइते कागज लेख्ने जस्ता चलखेल यहाँ पनि हुनसक्छ । राजनीतिको आँडमा अपराधीलाई बचाउन राज्य माहिर छ । त्यसका लागी अधिकारकर्मी र समाचारमाध्यमले निरन्तर खबरदारी गरिरहनु जरुरी छ ।
आफूलाई चित्त नबुझ्ने विचार र काम दुबैलाई नसहने र मारिहाल्न खोज्ने राक्षसी प्रबृत्तिको जरो निकै गहिरो छ । मृत्युको ठेक्कापट्टा गर्नेको यहाँ कमी छैन । प्रेम गर्नेलाई लखेटीलखेटी मार्ने, फरक विचार समूहलाई सिध्याउने, चरित्रमाथी दाग लगाएर आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कामको हिसाबकिताब गरिसाध्य छैन । दलितमाथीको थिचोमिचोलाई गैर‘दलित’ समाजले आफ्नो अधिकार सम्झेको छ । महिलामाथीको हेलाहोचोलाई आफ्नो बहादुरी सम्झेको छ । फरक विचार दबाउनुलाई समाजले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छ ।
कोही अपराधीले कोही महिलालाई प्रेम गरेको दाबी गर्छ । उसको प्रस्ताव स्वीकार नभएपछि ‘प्रेमिका’लाई नै एसिड छ्याप्छ । समाजले कथित भद्रभलादमी जुटाएर त्यही अपराधीसंग बिहे गरिदिन्छ । अर्को अपराधीले कोही युवतीलाई प्रेम गर्छु भन्छ । उसको कथित प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नभएपछि बलात्कार गर्छ । समाजलाई कथित ईज्जतको पीर छ । अनि कथित भद्रभलादमी जुट्छन् । समाजले बलात्कारीसंग बिहे गरेर पठाइदिन्छ । बलात्कारीको परिवार र बलात्कारीले थप यातना दिएपछि युवती आत्महत्या गर्न विवश हुन्छिन् । ‘समाज’ उनलाई चरित्रहिनको बिल्ला भिराउछ र दोबाटोमा हलल्ल हाँस्छ । गाउँगाउँमा बोक्सी भन्दै महिलालाई दिसा कोच्याउनेको पनि कमी छैन । समाजसंग पापको निकै ठूलो भण्डार छ । चियाइसाध्य छैन । गनिसाध्य र भनिसाध्य छैन ।
मोहन मैनाली बर्बरताको बिस्तार (देखेको देश किताबभित्र संग्रहित) शीर्षकको लेखमा लेख्नुहुन्छ—‘हिंसा र घृणाको पशुवत् चाहना अरु जनावरमा भएजस्तै मानिसमा पनि हुन्छ । तर, त्यस्तो चाहनालाई संसारले बोकेन भने त्यो होचो हुन्छ । संसारले बोक्यो भने त्यो विशाल हुन्छ । त्यसको विशालताले सभ्यतालाई निस्सासिने अवस्थामा पु¥याउँछ । यस्तो अवस्थाको पहिलो शिकार तिनीहरु हुन्छन्, जो तिनीहरु हुन्छन्, जो तिनका पालक, पोषक र वाहक हुन्छन् ।’ मैनालीको तर्क मननीय छ । हिंसा रोप्नेहरुलाई आफूलाई रोपेको हिंसाले नै सिध्याउँछ । हिंसाको खेलमा कसैले जित्दैनन् । तर यो कुरा हिंसा गर्नेहरुले सोचेका हुँदैनन्।
हिंसाको जगमा उभिएको समाज सधैं हिंसाको हिस्सा बन्न रहर गरिरहन्छ । त्यो हिंसा चौरजहारी, नार आदि अनेक हत्याकाण्डमा प्रकट हुन्छ । त्यो क्रोधाग्नीले आफूलाई पनि डढाउछ, अरुलाई पनि सिध्याउँछ । हातमा खरानी नपरेसम्म हिंसा अघाउँदैन । चौरजहारीले आफूलाई पनि सिध्यायो, अरुलाई पनि सिध्यायो । मानवता बिरुद्धको यो कुकर्मको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । देशमा मौलाएको दण्डहीनताले हिंसालाई मलजल गरिरहेको छ । दण्डहिनताको जगमा उभिएको हिंसालाई तह लगाउने उपाय भनेको राज्यको बलियो उपस्थिति र हिंसा बिरुद्धमा शुन्य सहनशीलता नै हो । हिंसा गरे डुबिन्छ, उत्रन सकिंदैन भन्ने चेत भयो भने हिंसा भित्रभित्रै डराएर बस्छ ।
प्रहरी बनेर देश सेवा गर्ने, परिवारलाई सुख दिने, आफूले माया गरेकी युवतीलाई सुख दिने नवराज बिकको सपना भेरी किनारमा नराम्ररी निमोठिएको छ । उनीसंगै अरु ५ युवाले पनि अनाहकमा जीवन गुमाएका छन् । उनीहरुको परिवारको सहारा लुटिएको छ । ढुंगालाई पूजा गरेर मान्छेलाई मार्ने समाजले यो कुकर्मको फल पक्कै भोग्नेछ । अपराधीलाई बचाउन राज्यसत्ताले रहर गर्यो भने प्रेम र करुणा पछि पनि यसरी नै निमोठिनेछ ।
भेरी किनारमा धकेलिएको मानवताले हाम्रो समाजको क्रुर तस्वीर बाहिर आएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अरु जुनसुकै आवरणमा होस्, हिंसाको हिस्सा सदा अस्वीकार्य छ । ‘दलित’ समुदायमाथी ‘गैरदलित’बाट भएको यो जघन्य कुकर्मलाई कानूनले कडा दण्ड दिनैपर्छ । कथित भद्रभलाद्मी जुटेर टालटुल पार्ने कुप्रथाको जरो नउखेलिएसम्म मानवता यसरी नै भेरीमा धकेलिनेछ । राज्य प्रशासनले गाउँगाउँसम्म बलियोसंग खुट्टा टेकोस् । चालचलन, संस्कृति र परम्पराको नाममा हिंसालाई मलजल गर्न पाईंदैन । मृतकका परिवार र घाईते सबैलाई न्यायको मलम मिलोस् ।
(हिमालखबर डटकममा २०७७ साल जेठ १७ गते शनिवार प्रकाशित लेखलाई परिमार्जनसहित राखिएको)
Posted bymilanbagale June 2, 2020 June 2, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on भेरीमा धकेलिएको मानवता
लेकका कुरा/केकका कुरा (कविता)
देश देख्ने भए
देख्ने चीज अनेक छन् ।
देश लेख्ने भए
लेख्ने चीज अनेक छन् ।
देश दुख्ने भए
दुख्ने चीज अनेक छन् ।
लेकका कुरा छोडौं ।
केकका कुरा गरौं ।
लेकमा बस्नु हुँदैन
लेक लागेरै मरिन्छ ।
लेकमा पस्नु हुन्न
लेखका कुरा छोडौं ।
लेकमा जानु हुँदैन ।
लेकै लागेर मरिन्छ ।
लेक खोज्दै हिडे
लेकमै थला परिन्छ ।
लेकमा बाटो काट्यो ?
तपाईंको मन फाट्यो ?
लेक काटिदिन्छु ।
केक चोखो चीज हो ।
लेप लाग्नु हुँदैन ।
—२०७७ साल बैशाख २७ गते
Posted bymilanbagale May 10, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on लेकका कुरा/केकका कुरा (कविता)